600W Led Stadium light for Sports Billboard Garage China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Ịgba Egwuregwu n'èzí 600w,Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 600W,Mmiri Iju Mmiri nke Egwuregwu Egwuregwu
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Ogige ọkụ bọmbụ > 600W Led Stadium light for Sports Billboard Garage
Ihe Nlereanya.: BB-LD-600W-CQ
Bbier na-ewepụta ogwe ọkụ dị n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí n'èzí, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa nke ọma na ọkụ ọkụ. Ngwá ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ a na-emepụta ihe ọkụkụ na-enye ezigbo ìhè ọkụ na oge efu.
IP66 n'èzí egwuregwu ọkụ 600W - A kwadoro ihe ngwọta okpomọkụ a ma kpochapụ ya na mmiri, ájá, mmanụ, na ọnọdụ ihu igwe siri ike
Oge 45,000+ - E wuru iji tachie obi, a na-eme atụmatụ a ka ọ dịgide ruo ihe karịrị afọ 20, n 'oge awa ọ bụla nke awa 3. Ọ bụ UV na-echebe ya ma na-ekpuchi ogwe ọkụ ndị na-abụghị yellowing polycarbonate.
Ọdịdị dị mma mere ka ìhè idei mmiri maka ebe egwuregwu egwuregwu - E mere ka ọ dị n'elu osisi ma ọ bụ mgbidi. Ọ naghị ebute ọgba aghara ma ọ bụ RF. Okpokoro ọkụ na-enye ọhụụ ọhụụ ka ọ dị ntakịrị
Okpokoro Okpomoku - Emebere iji gbochie okpomọkụ n'etiti -4 Celsius na 104 ° F
Ngwaahịa : Egwuregwu egwu > Ogige ọkụ bọmbụ
850W Ebube Mgba Ogba Ogo Ocha Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri nke Mmiri Mmiri Ìhè Mmiri nke 800W maka Ụlọ Nkata Kpọtụrụ ugbu a
IP65 Jiri oghere Arena 600W maka ire ere Kpọtụrụ ugbu a
Mmiri Igwe Mmiri mmiri 400 Watt Led 52000lm Kpọtụrụ ugbu a
600W N'èzí Ada Iju Mmiri Ìhè 78000lm 5000K Kpọtụrụ ugbu a
600W Led Stadium light for Sports Billboard Garage Kpọtụrụ ugbu a
Iju Mmiri Iju Mmiri N'èzí 600W Egwuregwu Stadiums 78000LM Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Ịgba Egwuregwu n'èzí 600w Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 600W Mmiri Iju Mmiri nke Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Ịgba Egwuregwu n'ime ụlọ Egwuregwu Ịgba Egwuregwu Gym Egwuregwu n'èzí 800w Egwuregwu n'èzí Egwuregwu Egwuregwu Egwu 640W